ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါဖက်စ် များ | ဟွန်ဒါဖက်စ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
ခရမ်းရောင် / ပန်းရောင် (10)
Silver Honda Fit Shutlle 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl White Honda Fit Shuttle 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်း...
Lks 224 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Fit Shuttle 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Honda Fit 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Black Honda Fit Shuttle 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Red Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Silver Toyota Fit 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Honda Fit Shuttle 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်း...
Silver Honda Fit 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Honda Fit 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 161 ညှိနှိုင်း
Pearl White Honda Fit 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Blue Honda Fit 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Pearl White Honda Fit 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
White Honda Fit 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင...
Lks 131 ညှိနှိုင်း
Grey Honda Fit 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်...
Silver Honda Fit 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
မြန်မာပြည်ထဲက ဟွန်ဒါ ဖစ် များ
အရောင်းသွက် ဟွန်ဒါ ဖက်စ် ဟတ်ဘတ်ကားများ
ဟွန်ဒါ ဖက်စ် ကားတွေဟာ ဟတ်ဘတ်ကား အသေးစားလေးတွေထဲမှာ အစီးများဆုံး နဲ့ အတွေ့ရအများဆုံးပါပဲ။ ကား အရွယ်အစားက သေးငယ်ပြီး ကျစ်လစ်တဲ့ အတွက် ရပ်နားမူ နေရာ ယူမူမှာ လည်း အဆင်ပြေလှပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလှပပြီး အင်ဂျင်ကလည်း ဆီစား သက်သာတဲ့ ၁၃၅၀ စီစီ အောက် အင်ဂျင်တွေ လာတာမို့ ပြည်ပ ကနေ သွင်းယူရမှာ အဆင်ပြေလှပါတယ်။ အခွန်မှာ လည်း USD ၅၀၀၀ မှာ ဆောင်ရတာ ဖြစ်လို့ ကား ဈေး အကုန်အကျမှာလည်း နည်းပါး သက်သာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုနေ လမ်းတွေကလည်း ပိတ်တာမို့ သွားလာရေးတွေမှာ ကားကြီး တွေနဲ့စာလျှင် စီးရတာ အဆင်ပြေလှတဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တံခါး အပါအ၀င် တံခါး (၅)ပေါက် လူငါးယောက်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘီးယက် ၊ လေးဘီးယက် စသည့်ဖြင့် လာပြီး အော်တိုဂီယာ တွေပဲ အသုံးများပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက် ၊ ဒုတိယမျိုးဆက်၊ တတိယမျိုးဆက်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ စလစ်လွတ် သွင်းလို့ရနေတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်တာမို့ ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၈ အထက်ကို သွင်းကြပါတယ်.။ ၂၀၀၈ ဆိုလျှင် တစ်နှစ်အောက် မော်ဒယ် နဲ့ သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ ဟွန်ဒါ ဟိုင်းဘရစ် ထုတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှာဆိုလျှင်တော့ ဖက်စ် ရှပ်တာနဲ့ ဖက်စ် ရှပ်တာ ဟိုင်းဘရစ်ကို တွေကိုတွေ့နိင်ပါတယ်။ ရှပ်တာ ကျတော့ အနည်းငယ် ဖက်စ် ထက်စာလျှင် ကားကိုယ်ထည် ပိုရှည်သွားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဟွန်ဒါဖက်စ် ပုံစံကတော့ဒုတိယ မျိုးဆက်မှာ ပုံပြောင်းပါတယ်။မီးလုံးတွေ ချွန်ထွက် သွားကာ ဒီဇိုင်းတွေပို ဆန်းသစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဟွန်ဒါ ဖက်စ်ကို ပေ့ါပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆီစား သက်သာမူကို ဦးစားပေးသော သူများအနေဖြင့် ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရမူမှာ လည်း လွယ်ကူပြီး ကား ကိုယ်ထည် သေးသွယ်မူကြောင့် ကား စမောင်းသူများ အတွက် ပါကင်ထိုးမူတွေမှာ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကလည်း စတိုင်ကျပြီး ကောင်းမွန်တာမို့ ဟွန်ဒါ ဖက်စ်ဟာ လူကြိုက်များ လျက်ရှိပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်စ်ကို ဟွန်ဒါ ဂျတ်ဇ်လိုလည်း ပြည်ပမှာ သိကြပါတယ်။ အာရှရဲ့ အချို့နေရာတွေ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနဲ့ သြစတြီးရီးယား စတဲ့ နိင်ငံတွေမှာ ဂျတ်ဇ်လို့ လူသိများပြီး ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ အမေရိက မှာ ဖက်စ်လို့ သုံးပြီး ခေါ်ကြပါတယ်။
အင်ဂျင်မှာ ၁.၂ လီတာ၊ ၁.၃ လီတာ၊ ၁.၅ တို့ကို ထုတ်ပါတယ် ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အခွန်နဲ့ ဆီစားသက်သာလိုမူကြောင့် ၁.၃ လီတာကို ရွေးခဲ့ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်အားဖြင့် စလစ်မလိုဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃စသည့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလျက် ရှိကြပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်ရဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေအား ၁၀၉ နဲ့အတူ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ရီဗျူးတွေအရတော့ မြို့တွင်းကိုတစ်ဂါလံ ၂၇ မိုင်သွားပြီး မြို့ပြင်မှာဆို ၃၄ မိုင်သွားပါတယ်။
ဟွန်ဒါဖက်စ် မှာ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိသည့်နည်းတူစွာ ဟွန်ဒါ ဖက်စ် ရှယ်တာကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဟွန်ဒါဖက်စ် ရှယ်တာတွေဟာ ပုံမှန် ဖက်စ်ကားတွေထက် ပိုပြီး ကိုယ်ထည် ရှည်လျားကြပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ဖက်စ်တွေမှာ ပုံသစ်နဲ့ ပုံဟောင်းဆိုပြီး နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပုံဟောင်းက အနည်းငယ် ချွန်ထွက်တဲ့ ပုံစံ မျိုးမဟုတ်ဘဲ တုံးတိတိ ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။ GD-1 လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက် ပုံသစ်ကတော့ GE-6 လို့ခေါ်ပြီး ထို မော်ဒယ်တွေကတော့ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းလည်း အနည်းငယ်ပြာင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ ဖက်စ်တွေဟာ ၁၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင် ဆီစား သက်သာတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားကလည်း သင့်တော်သလို ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းကလည်း ဆန်းပါတယ်။ အတွင်းဖက်မှာလည်း လူ (၅) ယောက်ထိုင်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပြီး တီဗီနဲ့ လေအေးပေးစက်တွေနဲ့ အခြား နည်းပညာမြင့် များကို သုံးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း သင့်တော်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ အရောင် မျိုးစုံကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား မော်ဒယ်တွေဆို စပေါ့ကားတွေတောင် လုပ်လို့ရတဲ့ ဘန်ဘားရှယ်တွေက စပေါ့ရှယ်တွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့မော်ဒယ်တွေမှာ မန်နျူးယယ် ဂီယာ (၅) ချက် ရရှိပါတယ်။
ဟွန်ဒါဖက်စ်ဟိုင်းဘရစ်က ၂၀၁၃ ကို ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ကနေ ၂၀၀ ကြား ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်ပေါ် မူတည်ပြီး တီဗီ ပါတာ၊ အနောက် ကင်မရာ ပါတာတွေ့ရှိသလို မပါတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ မပါရင် ဒီမှာ ပြန်တပ်လို့ရပြီး လေလံဈေးက သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် ပါရှိတာကိုပဲ လူတွေက ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ ဈေးကတော့ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ကနေ ၁၂၀ ၊ ၁၃၀ သိန်း လောက်ထိကို မော်ဒယ် ကောင်းကောင်း ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါဖက်စ်တွေဟာ မြို့တွင်း မြို့ပြင် အိမ်စီး ကားတွေ အဖြစ် သင့်လျော်ပြီး လောင်စာဆီစား သက်သာတဲ့ကားတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၀၀ စီစီမှာ စထားတဲ့ အတွက် ၀ယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ်ကအစ သက်သာစေမဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား အပိုပစ္စည်းတွေလည်း လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။